ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ မေလ ၂၉ ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေ အရေး နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကို တွေ့ရစဉ်
အာရှဒေသမှာ လူကုန်ကူးမှုပြဿနာကြီးတစ်ရပ်အဖြစ် ဦးတည်လာနေတဲ့ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ ပတ်သက် လို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့်၊ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဒေသတွင်းက တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ် မထိခိုက်သင့်ဘူးလို့ မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇတ်က သတိပေးပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းအကြား ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု မထိခိုက်စေတဲ့ အဖြေတစ်ခုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း၊ အာဆီယံရဲ့ မူဝါဒအရ တခြား အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ မိမိတို့ နားလည်ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမှန်ပေမယ့်၊ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် အိမ်နီးချင်းပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာ ပြဿနာတွေ၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ မပေါ်ပေါက်စေသင့်ကြောင်း မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်က သတင်းထောက်တွေကို မနေ့က ပြောကြားခဲ့တာပါ။
မလေးရှားအစိုးရဟာ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားနယ်စပ်အနီး တောအုပ်ထဲက လူမှောင်ခိုစခန်း ၂၈ ခုအနားမှာ လူ ၁၃၉ ဦး မြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားပြီး၊ အဲ့ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကြောင်း သံသယရှိတဲ့ မလေးရှားရဲအရာရှိ ၁၂ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။
Naing Win Zalid said 1,610,000 of those Bangali Illegals are atay abroad. They are now nomore illegal of Burma. They are Bangalis. Why UN and world are calling them from Burma. Boat people admitted They are from Bangaladesh, Why UN , RFA and world continuously accusing Burma , WHY? WHY? Why?... All of you supporting World Muslimnization?????. Show from your countries Burma can't survive in this world. MAYA people showed suicide, But Burma has our own ways. Don't bully Burma. There arealot of lands where they go to stay like Africa. Don't choice only Burma.
Lu Myoe Su
မလေးရှား က ဒီလို ပြောနေတာ ကို ဘာဖြစ်လို့ ချက်ကျလက်ကျ မတုန့် ပြန်နီုင်သလဲ
Jun 01, 2015 08:31 PM
အမယ်တော် ကိုရွှေ မလေးဝန်ကြီးချုပ်ရယ် ... ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နဲ့ မြန်မာပြည်ကလဲ အနည်းအပါး ပါချင်ပါမယ်။ အစိုးရတွေက နှင်လွှတ်တာ မဟုတ်။ လူကုန်ကူးတဲ့ ပွဲစားတွေ ပြောစကား၊ သူတို့ဘာသာ ယုံပြီး အလုပ်ရမယ် ထင်လို့၊ နေရေးထိုင်ရေး ပိုကောင်းမယ် ထင်လို့၊ တတိယနိုင်ငံသွားဘို့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲ အလကား နေထိုင်စားသောက်ချင်လို့ သူတို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူတို့ဘာသာ ပိုက်ဆံပေး ထွက်လာသူတွေကို ဘာဖြစ်လို့ မဆီမဆိုင် မြန်မာပြည်ကို အပြစ်တင်နေရတာလဲ။ ကျုပ်တို့က ပြန်ခေါ်တာတောင် အဲသည် ရွှေကိုယ်တော်တွေက မလာချင်ပါဘူး။ မလေးမှာ ကုလက ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ရအောင် ဖွင့်ထားတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပဲ သွားချင်တာ။ ပြီးတော့ အာဖရိက တိုင်းပြည်က လာပါ ခေါ်လဲ မသွားချင်ဘူး။ သြစီလို၊ ဥရောပလို အမေရိကားလိုမှ သူတို့က သွားချင်တာ။ အဓိက တရားခံက လူကုန်ကူးသူတွေပါ။ မြန်မာအစိုးရ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မတို့ ပြည်တွင်းမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားနေတဲ့ မူဆလင်တွေ အပြည့်။ ဘယ်သူမှ အဲသလို ထွက်သွားဘို့ မစဉ်းစားဘူး။
Jun 01, 2015 03:49 PM
I want to ask him only one question, why he did not make any blame or criticize to Bangladesh although it is so obvious the majority of those boat people are from Bangladesh. I am sure whatever he says, those Bengali will keep coming back.
Jun 01, 2015 05:32 AM
ရိုဟင်ဂျာေတွက ကိုယ် ပြ သာ နာ ကို သူတို့ကိုယ် တိုင်လုပ် နေ တာ ပါ။
Jun 01, 2015 04:33 AM
ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ရအောင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ ဆက်ရှိနေဘို့ လိုတယ်။ အရင်က မြန်မာပြည်အရေးဆိုပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေက အဖွဲ့အစည်းတွေလဲ အခု မြန်မာပြည်မှာ ငြိမ်သက်နေတော့ အလုပ် လုပ်စရာ မရှိ။ လူတွေဆီက အကြောင်းပြ အလှုခံစရာ မရှိ ဖြစ်နေတယ်။ လူတွေ တကျပ်လှုရင် သူတို့ က ၉၅ပြားလောက် စားပြီး တကယ့် ဒုက္ခသည်က ငါးပြားဘိုးပဲ ရတာ။ ဒုက္ခသည်များမှ သူတို့အတွက် ဝမ်းစာလှမှာ။